Tele RELAY တစ်ခု - မက္ကဆီကန်ကစားသမားအာဂျင်တီးနားရှုံးနိမ့်ကနေသင်ခန်းစာတွေယူနေကြသည်
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ "ဒီမက္ကဆီကန်ကစားသမားအာဂျင်တီးနားရှုံးနိမ့်ကနေသင်ခန်းစာတွေယူနေကြသည်
အဆိုပါမက္ကဆီကန်နည်းပြ Gerardo '' တာတာ '' Martino San Antonio တွင်သူ့အဖွဲ့မကျြနှာကိုအာဂျင်တီးနားရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ Getty
San Antonio - မက္ကဆီကို၏ရှုံးနိမ့် 4-0 အာဂျင်တီးနားဆန့်ကျင်တနင်္ဂနွေအဆုံးသတ် အယ်လ် Tri 2019 အတွက် unbeaten ပေမယ့်ရန်ပွဲရှိနေသော်လည်းကစားသမားသင်ယူဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
မက္ကစီကိုကောင်းစွာစတင်ခဲ့ပေမယ့်လက်တွေ့၏သူရဲကောင်းအားဖြင့်စာလုံးအမှားတွေ, အာဂျင်တီးနားရှေ့ဆက်လေးရည်မှန်းချက်များဂိုးသွင်းခွင့်ပြုခဲ့ Lautaro Martinez, သုံးဆ။ ဒီဂိမ်းကိုတခါတရံအဘို့ ပို. ပင်မနှစ်မြို့ဖွယ်ကြည့်ရှု အယ်လ် Tri, Copa အမေရိကတိုက် Centenario7အတွက်ချီလီမှ 0-2016 ရှုံးနိမ့်၏နောက်ကျောအမှတ်တရများ။
"ဒါဟာဒါမကောင်းတဲ့မဟုတ်ခဲ့," မှ Miguel Layúnတူညီဒီရှုံးနိမ့်နှင့်အတူရှိခဲ့သည်ရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုမှပြောခဲ့သည်။ "ဒါဟာဆိုးရွားပွဲစဉ်တူပေမယ့်ကျနော်တို့ 4-0 ပြီးဆုံးနှင့်ဒုတိယတစ်ဝက်တွင်ကျနော်တို့လိုငွေပြမှုဂိုးသွင်းနှင့်လျှော့ချရန်ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ "
"ကျနော်တို့က [အာဂျင်တီးနား] လှူဒါန်းမှုများကဲ့သို့အမျိုးသားရေးအဖွဲ့များကျနော်တို့သင်ခန်းစာတွေကိုဆွဲရမယ်, ခွင့်လွှတ်ကြဘူးကျနော်တို့ကဒီကိုထပ်ဖြစ်ပျက်မနိုင်ကြောင်းသိသောအမှားတွေလုပ်ပါ" ဟုသူကဆိုသည်။ "သူတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်အခြေအနေများအလျင်အမြန်ထသနှင့်စပ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အရသာထားခဲ့တယ်။ တခါတရံသူကဖွင့်ကောက်ရန်ခက်ခဲသည်။ "
- မာရှယ် Dilated ရှုံးနိမ့်မက္ကစီကို၏စိန်ခေါ်မှုရှင်းလင်းစေသည်
- မက္ကစီကို၏မှတ်စုများ: Araujo ဆိုးရွားသောသည့်အခါအယ်လ် Tri ပြိုကျကာကွယ်ရေး
- ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား 2022: သင်သိထားရန်လိုအပ်သမျှ
ဂိုးသမား Guillermo Ochoa သူ 11 ပွဲအပြီးရှုံးနိမ့်ခြင်းမရှိဘဲပွဲစဉ်အပြီးတွင်နေဆဲမယှဉ်ဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ကြေးပေါင်သန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲဖြစ်လိမ့်မည်။
"ဒါကတစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီးဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်သူ၏ခေါင်းရုတ်သိမ်းပေးရန်ရပါမယ်" ဟုသူကပြောသည်။ "ကျနော်တို့ကိုပြု၏အဆိုပါအလုပျဖွစျနိုငျသခဲ့ပေမယ့်ကျနော်တို့များစွာသောအမှုအရာကို fix အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်နေနှင့်စည်းလုံးညီညွတ်ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
ပေါ်တိုတောင်ပံကစားသမား, ယရှေု Corona, ထိုစောဒကတက် အယ်လ် Tri ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူပါသွားသောသူရသငျ့ဘူး။
"ဒါဟာတစ်ခါတစ်ရံကျွန်တော်အရူးဖြစ်ကြကျနော်တို့ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖြစ်သင့်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်" Corona ကဆိုသည်။ "ကျနော်တို့လေ့လာသင်ယူနှင့်တစ်ခုခုယနေ့ကဲ့သို့, နောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်ပါဘူးမျှော်လင့်ရပါမည်။ "
"ဒီစိတ်ဓာတ်ကောင်းလှ၏, ကယ့်ကြောင့်တခါတရံတွင်ဖြစ်ပျက်ရဲ့" ဟုသူကကြှနျုပျတို့ပွုအဘယျ ", ဆက်ပြောသည်? အဆိုပါစိတ်ဓာတ်ရှိ, ငါတို့ပဲငါ့ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
အင်္ဂါနေ့ရဲ့ရှုံးနိမ့်ပြီးနောက် Gerardo "တာတာ", မက္ကဆီကို၏နည်းပြ, သူ့အဖွဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာကသူ့ပြိုင်ဘက်ရင်ဆိုင်ဖို့နောက်ထပ်တိုက်ဆိုင်မှုလိုအပ်ကဆိုသည်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့ဘဝသည်နှင့်ငါ 11 ဆုံးရှုံးမပါဘဲကိုက်ညီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်စဉ်းစားကြဘူး [အဆိုပါရှုံးနိမ့်] စဉ်းစားကြဘူး," ၏အဆုံးမှာအာဂျင်တီးနားနှင့်ဘာစီလိုနာ၏ယခင်နည်းပြကဆိုသည် ဂိမ်း။ "ဒါကကျနော်တို့ရှိတစ်ဦးကပွဲစဉ်ဒုတိယအဆင့်ပါ။ ပထမဦးဆုံး [မတ်လ] ချီလီဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။ နှင့်အာဂျင်တီးနားနှင့်ချီလီအကြားသိသိသာသာခြားနားချက်ကျနော်တို့ဒီညကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားကျွန်တော်တို့ကိုထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်ကြောင်းကိုသိသောအမှားများကိုအမျိုးအစားကိုဖန်ဆင်းသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ "
"ကျနော့်ရဲ့နားလည်မှုလည်းဒီသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကဖြစ်ပျက်သည်မဟုတ်, ငါတို့ကပိုကစားရန်လိုအပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဂိမ်းများနှင့်ကဖို့အသုံးပြုရ, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/mexico/story/3940765/mexico-players-take-lessons-from-argentina-rout
လီဗာပူးလ် Glatzel နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားရေရှည်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုး